Mandoto Rindrina ny Biraon’ny Mpampanoa Lalàna Mialoha ny Hetsi-panoherana Kinasa Mandritra ny Fetim-pirenena Rosiana ny Mpijirika · Global Voices teny Malagasy
Mandoto Rindrina ny Biraon'ny Mpampanoa Lalàna Mialoha ny Hetsi-panoherana Kinasa Mandritra ny Fetim-pirenena Rosiana ny Mpijirika
Voadika ny 15 Jona 2017 16:29 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Deutsch, Español, English
Pikantsary avy amin'ny hafatra nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Biraon'ny Mpampanoa Lalàna ao amin'ny faritra Yaroslavl tamin'ny alahady maraina.
Ny alina mialoha ny hetsi-panoherana iadiana amin'ny kolikoly manerana ny firenena, izay nokasaina hatao miaraka amin'ny Fetim-pirenena ao Rosia, dia niditra an-tsokosoko tao amin'ny tranonkalan'ny Biraon'ny Mpampanoa Lalàna ao amin'ny faritra Yaroslavl ny mpijirika ary nandefa hafatra nivazivazy hoe: “Mijanòna any an-trano. Raha tsy izany dia ho gadrainay eo amin'ny toeran'i Dimon ianareo . “
Anarambositry ny Praiminisitra Dmitry Medvedev ny hoe Dimon izay lasa be mpampiasa rehefa namoaka sarimihetsika mitondra ny lohateny hoe “Tsy Dimon ho Anareo Izy” tamin'ny 2 Martsa ny Orina Mpanasoa miady amin'ny kolikoly an'ny lehiben'ny mpanohitra Alexei Navalny. Ahitana ny antsipirihany amin'ny kolikoly ataon'ireo manampahefana ambony Rosiana ny sarimihetsika, anisan'izany i Medvedev, ary nahatonga ny fipoahan'ny hetsi-panoherana natao manerana an'i Rosia tamin'ny 26 Martsa.
Nampian'ny mpisovoka hoe: ” Miantso ny olom-pirenena ny Biraon'ny Mpampanoa Lalàna tsy hanaiky ny fihantsiana ary hiala lavitra ny hetsika tsy nahazoana alalana!” ny fampidiran'ny mpijirika ny lahatsary YouTube “Tsy Dimon ho Anareo Izy” tao amin'ny tranonkalan'ny Biraon'ny Mpampanoa Lalàna.
Tamin'ny 11:15 atoandro ora ao Moskoa, nesorina ny tsanganana kanefa mbola mitoetra ihany ny “cache“.
Tamin'ny alahady maraina, nilaza tamin'ny famoaham-baovao tao an-toerana YarNews ny Biraon'ny Mpampanoa Lalàna fa nisy nisovoka ny tranonkala:
Hanadihady ny fanafihana ny vondrona mpampihatra lalàna manokana any amin'ny faritra. Horaisinaaraka ny valin'ny fanamarinana avy amin'ny Biraon'ny mpampanoa lalàna ny fepetra …
Atao ny famoriam-bahoaka manohitra ny kolikoly ny alatsinainy, izay nokarakarain'ny orina mpanasoa an'i Navalny na dia teo aza ny ezaka maro hanalana baraka ny hetsi-panoherana. Nalefa tao amin'ny YouTube ny lahatsary tohanan'ny Fanjakana manohitra an'i Navalny, ary lasibatra tamin'ny fanafihana isankarazany i Navalny sy ireo mpanohana azy , anisan'izany ny ranoka famonoana otrikaretina ” maitso manjelanjelatra” [mg]. Notànana tamin'ny famoriam-bahoaka manohitra ny kolikoly tamin'ny 26 Martsa ireo mpanao fihetsiketsehana an-jatony, hetsi-panoherana lehibe indrindra natao tao Rosia hatramin'ny taona 2011-12.